ဒုသမ္မတ ဦးဥာဏ်ထွန်း ကိုယ်ရေးအကျဉ်း | Freedom News Group
by FNG on August 28, 2012	ဖခင် ဒုတိယတောအုပ် (သစ်တော) ဦးစိန်မောင်နှင့် မိခင်မူလတန်းပြဆရာမ ဒေါ်သိန်းတင်တို့က
၁၉၅၄ ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါ ရီ (၁၂) ရက်တွင် ပဲခူးတိုင်း၊ သာယာဝတီ ခရိုင်၊ ဇီးကုန်းမြို့၊ ဂုံးလမ်း (သံပုရာကုန် လမ်း)၌ မွေးဖွားသည်။ ဂုံးလမ်းအစိုးရ မူလတန်းကျောင်းနှင့် ဇီးကုန်းမြို့ အစိုးရ
From: အင်တာဗျူး	← ပြန်ကြား ရေး ၀န် ရာထူး မှ ဦးကျော်ဆန်း ဖယ်ရှားခံရ
လျှပ်စစ် ၀န်ကြီး ဦးဇော်မင်း ကို ရာထူး မှ နှုတ် ထွက် ခွင့်ပြု →
August 30, 2012	Comments are closed.
Contact Us. info@freedomnewsgroup.com	Myanmar News in EnglishMyanmar's women boxers land blows for equalityMyanmar Emerges From the ShadowsUS blacklists Myanmar firms for NKorea arms tradeSoccer-Myanmar's fans riot after Southeast Asian Games knockoutUS blacklists Myanmar firms for arms trade with N.KoreaU.N. agency says Myanmar, Golden Triangle opium cultivation jumpsUN: Poverty pushing Myanmar opium output higherMyanmar Opium Production Rose 26% In 2013, Despite Economic and Political Reforms27 th Myanmar SEA Game Opening Ceremony Dining & Wine Discover wines from around the world
FNG Facebook PageTotal Visitors:Since 16 December 2008	9,605,867 hits